Ụka Igunkwụ - Ndụ Ịchụ Àjà
Previous Article Ozi Buhari maka Ụbọchị Emume Mbilite N'ọnwụ Kraịst
Next Article Okwu Ntụgharị Uche maka Wednezdee Ọma (WEDNEZDEE NTỤ)
Onyeisioche na steeti ahụ bụ Onyeozi Chukwu Benjamin Akanmu, kpọrọ òkù a oge ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka na Ibadan. Akanmu kpọkuru ndị òtù Kraịst ka ha ñomie ndụ umeala, ịhụnanya na ijere ndị ọzọ ozi nke pụtara ìhè na ndụ Jizọs Kraịst mere o jiri were nwụọ n'obe maka nzọpụta mmadụ.
Ọ gara n'ihu kpọọ nzukọ Kraịst ka ha na-ebi ndụ ga-amịpụta ezi ihe n'obodo ma dọrọ ndị mmadụ were bịakwute Kraịst dịka ha na-eme ihe ahụ Chineke nabatara. Ọ kwuru, "Oge Jizọs batara obodo Jeruselem, bụ ihe anyị na-echeta tata dịka Ụka Igunkwụ, mbata ya mere ka ka amụma nke onye amụma Zekaria buru: Ọ bụ onye mmeri, na-anya ịnyịnya ibu" bịa na mmezu.
"Anyị ga-ekpe ekpere maka ike nke dị omimi, ịkụziri anyị ịhụnanya na-adịghị akpa ókè, dịka ọ dị na ndụ Jizọs; ka anyị nye uche Chineke ohere ka o mee na ndụ anyị, anyị ga-ahụ n'anya ma gbasie ike mgbe ụzọ niile sịrị ike, wee ghara ịbụ ndị nzukọ Kraịst nanị n'egbugbere ọnụ".
Onye ụkọchukwu Ụlọụka Angịlịkan Ndị Nsọ, Koroduma, Nasarawa, bụ Ụkọchukwu Alexander Okoye, kwuru na Ụka Igunkwụ bụ emume eji echeta Ọgịga Jizọs Kraịst gara Jeruselem dịka eze. O tinyere na ọ bụkwa oge iji cheta na Jizọs Kraịst batara Jeruselem dịka onye nzọpụta, eze ndị eze na Onyenwe ndị nwe niile.
"Dịka ọ nọ n'ịnyịnya ibu ahụ were bata Jeruselem, ìgwé mmadụ soro ya, tụọ igunkwụ, àkwá ha n'ụzọ were n'eti mkpu Hosanna Hosanna dịrị nwa David, ngọzi dịrị onye ahụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị, Hosanna n'ebe kachasị elu" . Ọ rịọziri ndị otú Kraịst ka ha mara Jizọs dịka onye nzọpụta, eze ndị eze, onye na-egbo mkpa na Onyenwe ndị nwe niile, ebe ọ na-akpọkukwa ha ka ha ñomie ndụ umeala, ịdị nwayọọ na udo nke Jizọs.
O kpere na, "Dịka Jizọs batara n'ụlọ nsọ, chụpụ ndị ahụ na-agbanwe ego ma kpuo tebụl ha ihu n'ala, otu a ka Ọ ga-esi bata na ndụ anyị n'oge a, chụpụ njọ, ahụ ọnwụnwụ na ogbenye n'aha Jizọs. Amen."
Ọzọ, otu onye ụka, Maazi Cornelius Nnamdi, gosipụtara ekele ya nye Chineke maka ụbọchị Ụka Igunkwụ ọzọ, kwuo na ọgịga Jizọs gara Jeruselem dịka eze butere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya nke wetara nzukọ Kraịst olileanya nke ndụ ebighị ebi. Nnamdi kpere Chineke ka ọ nye nzukọ Kraịst amara iji ñomie ndụ umeala, udo, ichu àjà na irubeisi nke Jizọs. O kwuru, "Jizọs emeghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ n'onwe ya ma ọ bụghị ihe ahụ nke Chineke na-achọ; nke a bụ ihe ị ma aka were ndị otu Kraịst ta."